कोरोना संक्रमित छिमेकीको पूजादेखि घडेरी देखाउन गाउँसम्म पुगे – Saurahaonline.com
कोरोना संक्रमित छिमेकीको पूजादेखि घडेरी देखाउन गाउँसम्म पुगे
सौराहा अनलाइन | २०७७, १९ श्रावण सोमबार
विराटनगर :कोरोना संक्रमितलाई आइसोलेसनमा भर्ना गराउने विषयमा तारतम्य नमिल्दा संक्रमितहरुले भने सास्ती खेप्नु परेको छ । आइतबार राति मोरङको ग्रामथानका एकजना पुरुषले अस्पताल भर्ना हुन निक्कै हैरानी खेप्नु पर्‍यो ।
रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि कोशी कोभिड १९ उपचार केन्द्र लग्नुपर्नेमा उनलाई कोशी अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डमा ल्याएर छाडेपछि करिब ३ घन्टा अलपत्र बने ।
“पुलिस घरमा गएर एम्बुलेन्समा चढ्न भन्दै गए । चालकले एकातिर लग्नुपर्ने अर्को अस्पताल लगेर छाडिदिए । कहाँ जाने के गर्ने निक्कै बिलखबन्दमा परें,” उनले भने, “कोभिड अस्पतालतिर लग्नुपर्ने अर्कैतिर ल्याएर छाडिदिएछन् । पछि फेरि अर्को अस्पतालतिर लगे । अहिले भुइँमा म्याट ओच्छयाएर राखिएको छ ।”
केही दिनदेखि ज्वरो र खोकीको समस्या देखिएपछि उनी कोशी अस्पताल विराटनगरको फिभर क्लिनिकमा जाँच गराउन आएका थिए । चिकित्सकलाई देखाए । चिकित्सकले ज्वरोको औषधि दिए अनि घर पठाइदिए ।
“तर, ज्वरो विसेक भएन सुख्खा खोकी पनि उस्तै रह्यो,” उनले भने, “चित्त बुझेन फेरि कोसी अस्पताल आएँ अनि रु. ५ हजार तिरेर स्वाब दिएँ । रिपोर्ट पोजेटिभ आएछ ।”
आइतबार साँझदेखि करिब ११ बजेसम्म कोशी अस्पतालको इमरजेन्सी वार्ड अगाडिको पेटीमा भोकै प्यासै रहनुपरेको र निकायहरुबीच समन्वय नहुँदा आफूले अनाहकमा दुःख पाएको उनले बताए ।
संक्रमित पुरुषमा स्थानीय रुपमै संक्रमण भएको देखिएको छ ।
उनको ट्राभल हिस्ट्री छैन । उनमा संक्रमण देखिएको विषयमा ग्रामथान गाउँपालिकाका पदाधिकारीसमेत साँझसम्म बेखबर थिए ।
संक्रमित पुरुषले आफू संक्रमणको लक्षण आउनुपूर्व गाउँकै क्लिनिकमा औषधि खरिद गर्न गएको र सञ्चालककी छोरीमा संक्रमण देखिएको पुष्टि भएकोले उनैबाट आफूमा सरेको हुन सक्ने बताए ।
क्लिनिकका सञ्चालककी छोरी विराट अस्पताल (विराट नर्सिङ होम) मा कार्यरत हुन् ।
ती नर्समा अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सकसँगै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । उनी आइसोलेसनमा छन् । वरिष्ठ चिकित्सक ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीको काठमाडौंमा उपचार भइरहेको छ ।
ग्रामथानमा पुरुषमा संक्रमण देखिएपछि गाउँमा त्रासको वातावरण देखिएको छ ।
ग्रामथान १ झोराहाट बजार बिहानैदेखि सुनसान छ । समुदाय स्तरमा कोरोना पुगेको आशंकामा मानिसहरुको चहलपहल र आउजाउ छैन ।
स्थानीय समाजसेवी टिका खतिवडा भन्छन्,“गाउँमा कसरी संक्रमण आयो भन्नेमा हामी पनि चिन्ताग्रस्त छौं । संक्रमणको स्रोत पहिचान गर्ने र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरी स्थानीयको स्वाब संकलन तथा परीक्षण गर्न प्रदेश सरकारसमक्ष माग गरिरहेका छौं ।”
उनले सावधानी र सतर्कता अपनाउन अब हेलचेक्र्याईं गर्न नहुने बताए । ग्रामथान विराटनगर सीमाको पालिका हो ।
गाउँमा केही दिनअघि भएको छिमेकीको पूजामा समेत पुरुष सहभागी थिए । त्यहाँ अरु धेरै मानिसहरु पनि थिए । यसबाहेक जग्गाको कारोबार गर्ने भएकोले अर्का एक साथीसँग उनी मोटरसाइकलमा चढेर घडेरी देखाउन टोलटोल पुगेका थिए ।
संक्रमित पुरुष भन्छन्,“परीक्षणको दायरा बढाएर संक्रमण भए नभएकाहरु पत्ता लगाउनु पर्ने देखिएको छ ।”
प्रदेश १ का आईसोलेसन केन्द्रहरुमा अहिले बिरामीको चाप बढेसँगै भरिएका छन् । कोशी कोभिड १९ उपचार केन्द्र, गोठगाउँ र धरानमा पनि बिरामीको चाप बढ्न थालेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिष्द कार्यालयका अनुसार आइतबारसम्म प्रदेश १ मा १०७१ जनामा कोरोना संक्रमति फेला परेका छन् । ८२१ ज्ना डिस्चार्ज भएका छन् ।
आज बिहिबार यस्तो छ तपाइको राशिफल ? २०७७, १५ आश्विन बिहीबार
चितवनमा बुधबार ८४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि २०७७, १४ आश्विन बुधबार
वामदेव गौतमको मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा, शुक्रवार पेशी २०७७, १४ आश्विन बुधबार
चितवनमा पसलमा मूल्यसूची अनिवार्य राख्न निर्देशन २०७७, १४ आश्विन बुधबार
उखु किसानले पाउने भए भुक्तानी २०७७, १४ आश्विन बुधबार
संसदीय समितिमा महिला सांसद भन्छन्–बलात्कारीलाई फाँसी दिनैपर्छ २०७७, १४ आश्विन बुधबार
कर्मचारी नहुँदा व्यापार कम्पनीको चामल वितरण हुन सकेन
रुकुमपूर्व: रुकुमपूर्वमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको चामल मागअनुसार समयमै वितरण हुन सकेको छैन.....
२४ घण्टामा काठमाडौंमा ९०२ कोरोना संक्रमित थपिए
त्रिविको गोल्ड मेडल खरिद-बिक्री गर्नेलाई अदालतकाे यस्तो सजाय
नेपालमा फेरी १५५९ कोरोना संक्रमित थपिए
मन्दिरमा बली दिन भारत पुर्‍याइएकी नेपाली युवतीको उद्धार
कोरोनाले बढ्‌यो डिजिटल कारोबार, सबैभन्दा धेरै कारोबार वालेटबाट
अमिताभ बच्चनले अंग दान गर्ने